Raha isika rehetra izay lahatra milalao sary Mitana anjara toerana eo amin'ny lavo-pitia, ataontsika indraindray dia afaka miteny mafy. Eto ambany, isika ary naharihariko fomba samihafa izay afaka mahazo ny fitiavana ny fiainanao.
Little fantatra Way #1: Ho vonona ho fitiavana
Mila fotoana ny fifandraisana, fanoloran-tena, ary marefo. Ny fanalahidin'ny fahombiazana ara-pahasalamana sy ny fifandraisana dia ny ho tia ny tenanao aloha, ho amin'izany ny mamela anao ho tena tia olona iray hafa. Strong fifandraisana, amin'ny tenanao sy ny hafa, natsangana teo ambonin'ny fitokisana, manao ny marina, sy ny fifandraisana.
Little fantatra Way #2: Fantaro ary Fantaro ny Standards
Na dia tsy rariny ny mitsara ny olona araka ny kileman-toetra tanteraka, dia zava-dehibe ny mametraka fetra. Isika rehetra dia mahafantatra fa misy ny sasany eritreritra sy fitondrantena izay mety hisakana ny fifandraisanareo. Fantatsika ihany koa fa misy fitondrantena sy ny toetra sasany izay te isika ary mila ao amin'ny fifandraisana. Ny fahafantarana ireo dia hanampy ny hanokatra ny làlana mankany fitadiavana ny manan-danja hafa.
Little fantatra Way #3: Fantaro ny Difference ny Olona eo amin'ny fitiavana sy tia ny Fitiavana
Tsy misy zavatra na dia nanana mitempo fitiavana; na izany aza, indraindray marina izany fihetseham-po mandresy eritreritra momba ny mpiara-miasa. Zava-dehibe ny mitandrina ny raha afaka manavaka ny olona iray ny toetra fototra sy ireo no hametraka azy ireo.
Little fantatra Way #4: Aoka ho ao an-toerana amin'ny fotoana mety
Misy toerana sasany izay fotsiny mahatsiaro ho toy isika eo amin'ny singa. Na izany tamin'ny ora faly amin'ny namana, amin'ny fampisehoana na zavakanto Show, na amin'ny iray kilasy, ho eo. Ny toetra Hamirapiratra, hanampy ny olona hanatona anao.
Little fantatra Way #5: Miezaha ho Fisakaizana Akaiky-pihetseham-po eo anoloan'ny firaisana ara-nofo
amin'ny fitadiavana “ny fitiavana ny fiainanao”, ny fihetseham-po dia zava-dehibe fatorana. Raha maimaika firaisana ara-nofo dia tsy voatery ho zavatra ratsy, dia mety ho ny fihetseham-po fatorana sarotra kokoa ny fitetezana.
Little fantatra Way #6: Matokia tena
Henoy ny esory tsara ny taovany, ho aina naka ny fotoana, ary hanam-paharetana amin'ny fitsaranao. Mandritra izany fotoana izany, dia zava-dehibe ny tsy misokatra ny hevi-baovao sy ny fomba fijery eo amin'ny fitiavana.
Na ny lahatra, kely ireo fomba fantatra, na izy roa – zava-dehibe ny tsy kivy amin'ny tena fitiavana. Fa Rehefa manana izany, izany no tena mahafa-po ny fihetseham-po ao amin'izao tontolo izao.